Dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay Xidhiidhka Taiwan iyo Somaliland | Gaaroodi News
Dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay Xidhiidhka Taiwan iyo Somaliland
August 19, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Wasiirka Arimaha Dibada ee Dawladda Federaalka Axmed Ciise Cawad
Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay xiriirka muddooyiinkii u dambeeyay dhexmarayay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee soomaaliland iyo jasiiradda Taiwan.
Dowladda soomaaliya ayaa uga digtay Taiwan inay ku xadgudubto madaxbanaanida iyo midnimada Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda fedaraalka Axmed Ciise Cawad ayaa xusay in Taiwan ay ka digtoonaato ku xadgudubka qarnnimada Soomaaliya.
“Gobolka Shiinaha ka tirsan Waxaanu rabnaa inaan u sheegno inaysan dalka Soomaaliya, qarannimada Somaaliya iyo midnimada iyo wadajirka umadda Soomaaliyeed inaysan ku xadgudbin,” ayuu yiri Mr Cawad.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda fedaraalka ee Soomaaliya oo BBC oo la hadlayay ayaa sheegay in dowladda fedraalka aysan diidanayn hormarka Soomaaliland, balse Taiwan ay tahay in marka ay xiriir la sameynayso ay soo marto waddada saxda ah.
“Sidaan marar badan sheegnay Soomaaliland waa dhulkayaga, waa dadkeena, wanaag iyo kheyr ayaan la jecelnahay hormar ayaan la jecelnahay, laakiin aduunka waxa jira Albaab dalalka qaranimada iyo madaxbanaanida leh si loola dhaqmo ayaa jira,” ayuu yiri.
Mr Cawad ayaa intaa ku daray in dowlada Soomaaliya aysan aqoonsanayn Taiwan islamarkana ay aaminsan tahay inay tahay gobol ka tirsan Shiinaha.
“Taiwan anagu xiriir lama lihin oo waxaan aaminsanahay mabda’a hal Shiine oo dalka Shiinaha Bijiin ayaan u naqaanaa,” ayuu intaa ku daray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxaa uu sheegay in haddii ay Taiwan joojin wayso tallaabooyiinka ay waddo ay sharciga la tiigsan doonaan.
“Waxaan u sheegaynaa gobolkaasi iyo kuwa la midka ah in sooamaliya ay tahay dal qaran ah oo xorriyaddiisa iyo madaxbanaanidiisa leh sidaa daraadeed ay tahay in lagu ixtiraamo oo loo tixgaliyo qarannimadiisa haddii laakiin arrimahasi sii socdaan, tallbooyiin sharci ah oo loo baahan yahay ayaan raaci doonaa,” ayuu yiri wasiirka.
Hadalka dowladda fedaraalka ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ka dib markii ay dhawan ay Taiwan safaarad ka furatay magaalada Hargeysa islamarkana ay sheegtay inay safiir u soo magacaawday.
Jahwareer iyo khilaaf ayaa ka taagan waxay Taiwan tahay iyo weliba wixii loogu yeeri lahaa – dal mise gobolka k tirsan Shiinaha.
Xilligaa waxay ahayd markii laga adkaaday dowladdii wadaniyiinta ee Shiinaha oo kadibna u qaxay Jaziradda waxaana awoodda la wareegtay xukumaddi Shuciyiinta ee uu hogaaminayay Mao Zedong. Taiwan waxay markasta ka feejigantahay suuragalnimada weerar kaga Yimaada dowladda Shiinaha.
Marka Qaaradda Afrika la eego, Shiinaha mar buu ka ahaa wax aan si wayn looga taageerin, Taiwan na ay xoog ku leedahay. Balse hadda waxay u muuqataa in Taiwan laga masaxay qaaradda.
Inta badan, 1960-meeyadii, Taiwan waxay Shiinaha kaga guuleysatay Afrika, marka la eego dhanka xiriirka diblumaasiyadeed. Balse xiriirkaa wuu sii baaba’ayay marba marka ka dambeysa. Taageerada bini-aadamnimo ma uusan u horseedin helidda taageero siyaasadeed, waxaana taas ay sababtay in Taiwan laga diido Qaramada Midoobey.
Sannadkii 1971, Golaha Guud ee Qaramada Midoobeey wuxuu mariyay qaraar Taiwan u diiday in kursi ay ka hesho xarunta UN ee Mareykanka, waxaana lagu xaqiijiyay kusriga Shiinaha ee Golaha uu ku leeyahay.